आमाको नाममा राक्षस, पतिको मृत्यु पछि अवैंध सम्बन्ध राखेर बच्चा मार्ने आमा पक्राउ ! - MONGOL KHABAR
आमाको नाममा राक्षस, पतिको मृत्यु पछि अवैंध सम्बन्ध राखेर बच्चा मार्ने आमा पक्राउ !
संखुवासभा । आमा शब्द आफैंमा एक भगवानको रुप हुन्छ भनिन्छ तर कहिलेकाँही तपाईले तिनैं आमाको राक्षसी रुप पनि देख्नुपर्नेहुन्छ । खाँदबारी नगरपालिकाकी एक महिला नवजात शिशु हत्या अभियोगमा पक्राउ परेकी छिन् । खाँदबारी ६ मयमकी ३७ बर्षीया फुलमाया राई शिशु हत्या अभियोगमा फक्राउ परेकी हुन् । उनका पतिको मृत्युपश्चात अवैंधसम्बन्ध पछि गर्भ रहेको बच्चाको फुलमायाले हत्या गरेकी हुन ।
एकल जीवन बिताईरहेकी फुलमायाले अवैध गर्भधारणपछि जन्मिएको शिशुको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उनको पति टंकमान राईको केही बर्षअघि नै मृत्यु भएको थियो । फुलमायाले बच्चा जन्माएर हत्या गरी डोकोमा राखेर फाल्न लैजाँदै गरेको अवस्थामा स्थानीयले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।